Ungayivumelanisa njani ikhalenda yakho yeGmail kwisicelo seKhalenda | Ndisuka mac
Ungayivumelanisa njani iikhalenda zakho zeGmail kwiNkqubo yeKhalenda
Olu lolunye lolo khetho oluza luncedo ukuba besisebenzisa iikhalenda kwiakhawunti ye-imeyile ye-imeyile, kuba iyasivumela ukuba sihambisane nayo yonke imihla ephawulwe kwikhalenda nesicelo sethu seMac. ilula kwaye yiyo loo nto siza kukhumbula amanyathelo ekufuneka siwalandele kubo bonke abo basebenzisi abangayisebenzisiyo kunye nabasebenzisi beMac abatsha.
Amanyathelo alula kwaye ngokulula kufuneka senze ibhokisi ebonakala kwiiNgcaciso zesicelo seKhalenda yeMac, siya apho ikhoyo kwaye sibone ukuba yeyiphi ibhokisi. Into yokuqala kukuba neakhawunti yethu ye-Gmail kwi-Mac emva koko Oku kuya kubonakala ngokuthe ngqo ngokufaka isicelo seKhalenda-Ukukhetha-iiAkhawunti:
Nje ukuba sibe kweli nqanaba, konke ekufuneka sikwenzile ukuvumelanisa iikhalenda zeGmail kwisicelo seKhalenda kwi-Mac yile: Sebenzisa le akhawunti. Nje ukuba kuphawulwe, ukuqeshwa kwethu, izikhumbuzo kunye nemihla ziya kuvela ngokuzenzekelayo kwikhalenda. Yintoni egqithisile singasebenzisa ukhetho "Ukuhlaziya iikhalenda" rhoqo rhoqo ukuthanda kwethuCinga ukuba sikwiMacBook kungcono ukubuza uhlaziyo rhoqo, ke ukusetyenziswa kwezixhobo akuphawulwanga.
Kwaye ngale ndlela ilula siya kuba nakho ukungqamanisa iikhalenda zeGmail kwisicelo sethu seKhalenda kwiMac. Ukuba into esiyifunayo kukususa ukungqamanisa, senza ukuba isebenze «Yenza le akhawunti» kwaye yiyo, iikhalenda ziyakuyeka ukuvumelanisa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Tutorials » Ungayivumelanisa njani iikhalenda zakho zeGmail kwiNkqubo yeKhalenda
I-AirPlay ifika kwiifoto zikaGoogle ukuze ikwazi ukuyisebenzisa nge-Apple TV
IMactraker ihlaziyiwe yenguqulo 7.6.5 yokongeza i-iPad entsha